Malunga nathi -Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Ngaphambi ko-2008, iimveliso zethu eziphambili zii-110 kV kunye neswitshi esisezantsi esinevolthi yokuzahlula, ngesiphumo sonyaka samakhulu amawaka eeseti, senziwe ngerabha esinganyangekiyo irabha yesilicon kwaye yaphuhliswa ziingcali zerabha ezaziwayo, oochwephesha kunye neengcali zegridi kwiminyaka esixhenxe uphando kunye novavanyo. Iimveliso, ezenze iirekhodi kwilungelo lokulawula wedwa. Emva kokuvavanywa yi-Wuhan High-Voltage Research Institute State Grid Corporation yase China, iZiko leSizwe loLawulo loMgangatho kunye noVavanyo lwe-Insulator kunye ne-Surge Arrester, ngokwemigangatho yesizwe i-GB11033, i-GB5598, i-JB5892-1991, i-JB / T8952-1999, iimveliso zibe kuthathwa njengokufanelekile ukuhlangabezana nemigangatho yesizwe kuyo yonke imiba.
Phakathi kwabo bonke abasebenzi abangama-256, abantu abanezidanga zobugqirha okanye isidanga sebhatshela abasi-7. Funa inkqubela phambili yetekhnoloji; Ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu ”yimfundiso yethu ngalo lonke elixesha.
Inkampani yethu ibisoloko ikwindawo ekhokelayo ekhaya kunye nenkolelo yayo yokuphucula, ukuqinisa amandla obuchwephesha, Ukwenza ulawulo lwezenzululwazi kunye nokuhlangabezana neemfuno ze-ISO9001:Umgangatho we-2000, isiqinisekiso somgangatho opheleleyo kunye nesiqinisekiso, ubuchule bokuvavanya obuphambili kunye nokuvunywa emva kwenkonzo.
Ukukhangela phambili ukufumana intsebenziswano kunye nawe kwixa elizayo.
Ingqina ukukhula kwethu
Iminyaka eli-10, inkampani yethu kulwakhiwo grid yesizwe kunye retrofit inikeza izigidi nokufakwa intambo kunye nezinye iimveliso network ukuxhasa. emva ko-1998 inkampani yophando kunye nophuhliso lwe-500kV kunye ne-insulators ye-voltage esezantsi, i-35kV kunye ne-voltage esezantsi ye-zinc oxide surgeon arrester, iswitshi yokuhlukanisa, i-fuse yokuyeka, ityhubhu yombane ye-bus-bar, i-booster, i-Cable sheath limiteders (ibhokisi), udonga, njl iye yaqonda iimveliso zombane ukusuka kuxinzelelo olusezantsi ukuya koxinzelelo oluphezulu kunye nokutshintsha koxinzelelo lwe-ultrahigh. ; ukusuka ekungatshatini ukuya kwiyantlukwano, Kubonakalisa ukujonga kwenkampani kwikamva, ukuze kwenziwe iseti epheleleyo yabasebenzisi beenkonzo zololiwe ophambili wengcinga. Kwaye wenza igalelo elikhulu kumandla ombane, kaloliwe, ipetroleum, imigodi yamalahle kunye nenkqubo yokubonelela ngombane kumashishini amakhulu.
Ezona mveliso ziphambili kwikhathalogu: i-220kV kunye ne-voltage esezantsi ye-Zinc oxide surge arrester, iswiti eyohlukanisa, i-fuse yokuyeka ukuphuma, ityhubhu yombane ye-bus-bar, i-booster ye-shed, i-Cable sheath voltage limers (ibhokisi), i-wall bushing, i-110kV kunye nokukhethwa kwamandla ombane asezantsi, ukubanda okupheleleyo okubandayo okanye izixhobo ezincedisa ukufudumeza ubushushu, i-500kV kunye ne-low voltage edibeneyo yokwambathisa njl.njl.intlobo ngeentlobo zeemveliso zombane.
Ngexesha lakutshanje sithathe izincedisi zentambo ezincinci (iiseti ezili-100, ixesha lokuhanjiswa ziintsuku ezili-15), i-insulator (iziqwenga ezingama-630, ixesha lokuhanjiswa kweentsuku ezili-15), iswitshi ekwahlulahlula (iqela lama-300, ixesha lokuhanjiswa kweentsuku ezingama-45), ishishini, amandla emveliso Isidanga sokugcwaliswa ngama-40%, ukukwazi ukwenza le bhidi kwimveliso.